FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA : Hilatsaka ho kandidà indray amin’ny taona 2018 i Roland Ratsiraka ?
Apetraka ny fanontaniana fa ny valiny efa nambaran’ny mpiara-miasa akaiky amin’ny minisitry ny Fizahantany Ratsiraka Roland. 13 décembre 2017
« Hilatsa-kofidiana ho Filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ny minisitra Roland Ratsiraka ary efa miomana fatratra amin’izany ity farany », hoy izy. Hifaninana amin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina arak’izany i Roland Ratsiraka amin’ny taona ho avy.
Mety izay angamba no mahatonga an’ity mpikambana ao amin’ny governemanta Mahafaly ity maka bahana ary mitsikera ny fitondrana Rajaonarimampianina tato ho ato. Tena marina tsy nampoizin’ny mpanara-baovao maro ny naneken’ingahy Roland Ratsiraka hiara-hiasa amin’ny Filoha Hery Rajaonari mampianina. Ity farany raha tsiahivina izay nolazainy fa « Hery tonta » nandritra ny fampielezan-kevitra nataony tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena farany teo.
« Ekena fa adidy ny tsy an’olon-dratsy fa rehefa nalàna tao amin’ny minisiteran’ny Asa vaventy i Roland Ratsiraka dia tsy tokony nanaiky natao ho minisitry ny Fizahantany », hoy ny fanazavana nataon’ny mpanara-baovao iray. « Mafy ary ho sarotra amin’ingahy Roland Ratsiraka ny handresy lahatra ny vahoaka amin’ny fifidianana manaraka izao. Isany nidoka ny fitondrana ankehitriny sy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina mantsy ingahy Roland Ratsiraka, volana vitsivitsy lasa izay dia izao indray ve hilaza izy fa tsy mety ny ataon’ity farany sy ny Hvm ? Mariky ny tsy fahamatorana izany rehetra izany ary midika ihany koa fa baikoin’ny fitiavan-tena fotsiny ity minisitry ny Fizahantany ity. Miara-misôsy aloha e e e », hoy hatrany ity farany.
Tena marina voafitak’ingahy Hery Rajaonarimampianina i Roland Ratsiraka izay filohan’ny antoko Mts. Niparitaka ireo tompon’andraikitra niara-niasa akaiky amin’ity farany raha tsy hilaza afa-tsy ny minisitra Ramanantsoa Benjamina izay efa namadika palitao.
Nomen’ingahy Hery Rajaonarimampianina toerana tsara ao amin’ny governemanta Mahafaly ity farany mba hahafahany hisarika ireo ambany tanàna ao Antananarivo amin’ny fifidianana Filoham-pirenena hatao eto amintsika, amin’ny taona ho avy. Vinavina daholo izany rehetra izany fa tsy adala akory ireo mponina eny amin’ny faritra ambany ary mahalala izay olona na kandida azon’izy ireo antenaina.